Miresaka Seminera momba ny fanakanana tranokala maimaim-poana sy programa momba ny harena an-kibon'ny tany
Ny fomba amam-panao mahazatra dia mampiasa API na fanivanana pejy web amin'ny fanomezana ny fehezan-dalàna marina. Ny fanasitranana ny tranonkala dia ampiasain'ireo izay nanombohana ny orinasa na efa manomboka iray. Noho io fanao io dia azonao atao ny manadio toerana maro araka izay tratra ary mandamina ny angon-drakitra araka izay takinao. Eto izahay dia niresaka momba ny fandaharana sy ny fandaharan'asa momba ny harena ankibon'ny tany .
Mampalahelo fa ny fampahalalam-baovao sosialy sy ny angon-drakitra misokatra dia miseho amin'ny endriny tsy voarindra. Miaraka amin'ny Computyne dia afaka manala mora foana ny tranonkala maro sy ny tambajotra sosialy ianao. Afaka manampy anao koa izy hamonjy sary amin'ny fitaovana misy olana. Ny Computyne dia manome serivisy haingana haingana, marina sy azo atokisana. Azonao atao ny manala ny angona avy amin'ny Wikipedia, ny sariitatra, ny jiro, ny fotsy fotsy, ny Google Maps, ny Yelp ary ny Twitter.
2. Grepsr ho an'ny Chrome:
Tsy toy ny ankamaroan'ny fitaovana enti-tranonkala manangona angon-drakitra na fampahalalana mahasoa, i Grepsr dia afaka manamarina izany. Raha ny marina, i Grepsr dia manangona tahirin-kevitra ao amin'ny Google Drive, saingy misy koa ny Dropbox, Amazon, ary ny FTP.
Tarantoola dia manana ny maha-izy azy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny tetikasa maimaim-poana amin'ny tranonkala malaza dia fantatry ny mpandika teny malalaka. Efa nandritra ny taona maromaro izao no nanala azy ireo tamin'ny tranokala sy bilaogy maro, ary afaka manaparitaka ny tranonkalanao sy mamoaka angon-drakitra mifototra amin'ny tranokala hafa.
iDataGuru dia manome ny antsipiriany, tahirin-kevitra azo antoka sy azo antoka vice, tranonkala mitsambikimbikina amin'ny tranokala, fanasitranana ny efijery, ary ny fantsom-pampierana amin'ny lahatsoratra. Amin'ny maha-rindrambaiko malaza, iDataGuru dia manala ny angon-drakitra avy hatrany ary tian'ny mpitsabo matihanina, manam-pahaizana IT, banky, manamboninahitra, ary mpamorona tranonkala.
BotScraper dia fitaovana maoderina sy mahagaga ary fitaovana momba ny harena ankibon'ny tany izay mikaroka lalina ao anaty aterineto ary mahita ny tahirin-tsolika rehetra ho anao. Avy eo dia manova ny vaovao tsy misy dikany amin'ny fampahalalana mahasoa, mamela ny sisin'ny orinasanao an-tserasera. Fivarotana tsy misy fakantsary 100% izay miara-miasa amin'ny serivisy tranonkala hafa mba hanomezanao tolotra manokana, manome ny zavatra andrasanao ary manatanteraka ny filan'ny orinasa. BotScraper dia fandaharam-pamokarana fampiroboroboana an-tserasera izay namolavola ny aterineto tamin'ny alàlan'ny angon-drakitra azo antoka. Ity rindrambaiko ity dia afaka manaisotra ny mailaka sy manakona ireo tranonkalan'ny coded sy ny mailaka maimaim-poana tsy misy olana Source .